Alpha-Arbutin Powder (84380-01-8) Mpanamboatra - Phcoker Chemical
Sokajy: Hatsaran-tarehy peptide, Peptide
Lahatsary Alpha-Arbutin Powder (84380-01-8)
Alpha-Arbutin Powder (84380-01-8) fepetra arahana
Anarana simika l alpha-Arbutin
Drug Class Peptide fotsy
molekiolan'ny Formula C12H16O7
molekiolan'ny Wvalo 272.25 g / mol
Monoisotopic Mass 272.089603 g / mol
mitsonika Point 195-196 ° C
Solubility Matsiro anaty rano sy toaka
Storage Temperature Notehirizina amin'ny mari-pana ny trano
Application 1. Alpha-Arbutin vovony dia nampiasaina mba hisorohana ny pigmentation sy hanodinana ny hoditra tsara tarehy.
2. Ny vovony Alpha-Arbutin dia azo ampiasaina hanodinkodinana ny hoditra, hisorohana ny lalan-drà sy ny freckles, hitsaboana marika sunburn ary hifehezana ny melanogenesis.
Inona no Alpha Arbutin vovoka?
"Arbutin dia sombin-tany avy amin'ny zava-maniry bearberry izay misy hazavana mamirapiratra amin'ny hoditra," "Manelingelina ny asan'ny angovo antsoina hoe tyrosinase, izay ilaina hamokarana melanin na pigment ao amin'ny hoditra."
Alpha arbutin dia isomeran'ny hebogen, izay hita fa manana fiantraikany miaro amin'ny tyrosinase mahery vaika noho ny arbutin tato anatin'ny taona vitsivitsy izay ary nahasarika ny saina ho amin'ny tsenan'ny kosmetika. Ny Αlpha-arbutin dia manakana ny hetsika tyrosinase amin'ny fahirano ambany be, na dia tsy mitovy aza ny fiasan'ny fantson-dra amin'ny arbutin, ny heriny dia saika 10 misy fotoan'ny arbutin, ary amin'ny fitrandrahana avo kokoa dia tsy misy fiantraikany ny fitomboan'ny sela. Ao amin'ny 2002, alpha-arbutin dia nampiroborobo amin'ny tsenan'ny kosmetika ho toy ny fitaovana mavitrika marefo sy mahomby. Alfa-arbutin dia mety mahatonga ny hoditra hamirapiratra sy mihamafana. Misy fiantraikany miharihary amin'ireo marika novolavolaina tamin'ny fandoroana ultraviolet. Ny fananana simika dia azo antoka kokoa noho ny beta arbutin, ary azo ampiasaina mora kokoa izy io amin'ny makiazy fotsy sy famirapiratra isan-karazany.
Alpha-Arbutin Powder dia esorina amin'ny bearberry. Izy io dia fitaovana iray mavitrika biosynthetic izay madio, manondraka rano ary amboarina amin'ny endrika vovony. Ny vovoka alfa-arbutin dia akora vita amin'ny kosmetika avo lenta amin'ny alàlan'ny fomba fiasa iraisam-pirenena biolojika avo lenta, izay mampifangaro ny gliôkidra amin'ny alàlan'ny molekiola hydroquinone hamorona A-arbutin.
Amin'ny maha-artifact telo kanto ny tontolon'ny fotsy ity, Alpha-arbutin dia ampiasaina amin'ny vokatra fikarakarana hoditra fotsifotsy avo lenta amin'ny alàlan'ny marika kosmetika malaza eran-tany. Izy io dia ampiasaina amin'ny vokatra fitsaboana fanadiovana avo lenta
Ahoana ny fiasan'i Alfa arbutin?
Ny ar-arbutin dia afaka miditra lalina ao anaty hoditra, ary mety manakana ny asan'ny tyrosinase izay hita ao amin'ireo sela fipoahana ao anaty stratum corneum nefa tsy misy fiantraikany amin'ny fifindran'ny sela. Izy io dia misakana ny fananganana melanin ary mamorona fihena avo roa heny eo amin'ny velaran'ny hoditra, manakana ny fananganana ny melanin ary hahatratrarana voka-doko amin'ny fanadiovana.
Fampiasa vovoka alpha arbutin.
(1). Ny fampiasana Alpha Arbutin Powder amin'ny indostrian'ny kosmetika (vokatra tena tsara ho an'ny famirapiratry ny hoditra)
Ny Alpha Arbutin Powder dia miaro ny hoditra amin'ny fahasimbana ateraky ny radical afaka Alpha Arbutin dia mpandraharaha miaro ny hoditra izay tena be mpitia ao Japon sy ny Asiancountries ho an'ny hoditra de-pigmentation, ny Alpha Arbutin Powder dia manakana ny fananganana pigmentan'ny melanin amin'ny alàlan'ny fanakanana ny hetsika Tyrosinase.
Alpha Arbutin Powder dia mpandraharaha miaro azo antoka amin'ny fampiasana ivelany izay tsy misy poizina, famporisihana, tsy fofona mahafinaritra na vokatry ny tsindry toy ny Hydroqinone.
Ny fanodikodinana ny Alpha Arbutin Powder dia rafi-pandefasana mampandeha ny vokatra amin'ny fotoana. Alfa Arbutin dia fomba iray hampidirana ny thehydrophilic Alpha Arbutin ao amin'ny haino aman-jery lipophilika. Arbutin dia manome toetoetra lehibe telo: fiantraikany amin'ny fanapahana, fiantraikany amin'ny fahanterana sy fanivanana UVB / UVC.
(2). Ny fampiasana Alpha Arbutin Powder amin'ny indostrian'ny fitsaboana
Miverina tamin'ny taonjato 18 faha-10, ny Alpha Arbutin Powder dia nampiasaina voalohany tany amin'ny faritra fitsaboana ho toy ny anti-inflammatory sy antibacterial agent. Alpha Arbutin Powder dia nampiasaina manokana ho an'ny cystitis, urethritis ary pyelitis. Ireo fampiasana ireo dia mbola mandraka androany fa mampiasa fanafody voajanahary ihany no ampiasain'ny fanafody voajanahary.
Ary koa ny Alpha Arbutin Powder dia mety ampiasaina hametahana ny halavan'ny fihanaky ny bakteria ary mba hisorohana ny bakteria misy bakteria dia ampiasaina koa amin'ny arbutin Powder amin'ny fitsaboana ny aretim-peo amin'ny hoditra. Vao haingana kokoa, ny Arbutin Powder dia nampiasaina mba hisorohana ny pigmentation ary hanodinana tsara ny hoditra. Mandritra izany fotoana izany dia azo ampiasaina ny manala ny hoditra ny Arbutin Powder, hisorohana ny lalan-drà sy ny zipo, handrindrana ireo marika sunburn ary hifehezana ny melanogenesis.
Ny fampiasana arbutin alfazy indrindra:
Ny vovony Alpha arbutin dia nampiasaina voalohany tany amin'ny faritra fitsaboana ho toy ny anti-inflammatory sy anti-antibacterial agent.
Ny vovobony arbutin alfazo ampiasaina indrindra amin'ny cystitis, urethritis ary pyelitis.
Ny vovony arbutin alfa dia mety ampiasaina hamoronana ireo halavan'ny fihanaky ny bakteria ary mba hisorohana ireo bakteria misy poizina.
Ny vovony Alpha arbutin dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny aretin-koditra amin'ny hoditra.
Ny vovony alpha arbutin dia nampiasaina mba hisorohana ny pigmentation sy hanodinana ny hoditra tsara tarehy.
Ny vovony arbutin alfa dia azo ampiasaina hanapotihany ny hoditra, hisorohana ny lalan-drà sy ny freckles, hitsaboana marika sunburn ary hifehezana ny melanogenesis.
Manatsara ny hoditra ny alpha arbutin, nahoana no nisafidy ny Arbutin?
Fa maninona no tena manokana ny arbutin? Malemy fanahy noho ny hoditra manelatrelatra amin'ny hoditra hafa. "Koa satria ny singa mavitrika arbutin dia avoaka miadana, dia mety ho sosotra noho ny mpitroka hazavana hafa ary tsara kokoa ho an'ireo manana hoditra saro-pady,".
Ny vovony Arbutin dia manana fiarovana ny masoandro: Arbutin, avy amin'ny zavamaniry bearberry, dia mety hampihena ny haavon'ny hoditra rehefa maizina amin'ny masoandro amin'ny alàlan'ny fanakanana ny famokarana tyrosinase.
Ny vovoka arbutin malemy amin'ny hoditra: Raha ny hoditra manelatelatra ny hoditra dia afaka manamaina sy manelingelina hoditra, ny arbutin dia tsy mahasosotra azy.
Ny vovoka arbutin Manatsara fanodinana tsy mitongilana: Satria ny arbutin dia manakana ny tyrosinase, izay angovo izay manampy amin'ny famokarana melanin, dia afaka misoroka ny maizina na manampy amin'ny manala azy ireo aza, ka mitarika fangaro kokoa.
Ny vovoka arbutin dia miha-javona maizina: Raha misy faritra maizimaizina tsy misy masoandro na vanimpotoana, ny arbutin dia afaka manampy amin'ny faharatsiana ny endriny.
Azo ampiasaina amin'ny vokatra skincare hafa: Tsy misy fifanarahana ratsy eo amin'ny arbutin sy ny skincare hafa.
Azo ampiasaina indroa isan'andro: Ho an'ny valiny farany, ny arbutin dia azo ampiasaina na maraina ary amin'ny alina.
Azo antoka kokoa noho ny hydroquinone: Nandritra ny fotoana kelikely, ny hydroquinone dia ilay akora mampihena ny fahagagana «fahagagana» mandra-pahatongan'ny nanambarana azy ho karsinogogen. Na dia miasa amin'ny alàlan'ny famonoana ireo sela izay miteraka pigmentation sy melanin aza ny hydroquinone, ny arbutin dia manakana ireo enina izay mandrisika ireo sela mamokatra pigment.
Mandaitra mihanaka mivalona: Mitovitovy amin'ny fahaizany mihena ny poizina, ny arbutin dia tsara koa amin'ny famoahana ireo mavo moka mena-mena izay mivezivezy taoriana kelin'ny nandehanana azy.
Vokatry ny Arbutin
Alohan'ny handehananao hividy ny vokatra vita amin'ny hoditra rehetra arbutin dia tokony ho fantatrao izao: Nisy ny olona sasany izay tebiteby amin'ny arbutin, noho ny tombam-bidy mirehitra mitovy aminy miaraka amin'ny hydroquinone. Na izany aza, ny fanadihadiana momba ny arbutin dia nanambara tamim-pahamarinana fa "fanafody azo antoka sy mahomby amin'ny fanamainana ny hoditra izany."
Soso-kevitra fanampiny soso-kevitry ny Alpha-arbutin?
Fampiasana soa aman-tsara ≤5%;
Ny fatra azo atao dia 0.2% ~ 2%;
OTC over-the-counter sy ny fitsaboana may ary ny fampiasana ivelany hafa external 10%.
1.Syntheses ny arbutin-alpha-glycosides ary ny fampitahana ny fiantraikany mifototra amin'ny alpha-arbutin sy arbutin amin'ny tyrosinase olombelona. Sugimoto K et al. Chem Pharm Bull (Tokyo). (2003)
Ny fivoaran'ny 2.Recent amin'ny famokarana biolojika amin'ny α-arbutin. Zhu X et al. Fampiasa Microbiol Biotechnol. (2018)
3.Dual fiantraikan'ny alpha-arbutin amin'ny hetsika monophenolase sy diphenolase amin'ny tyrosinase misy holatra. Qin L et al. PLoS iray. (2014)